ပြ2018နာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးသောလက်တွဲဖော်အကြမ်းဖက်သူကိုကျူးကျော်သူများကိုကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ (၂၀၁၈) - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်စေ
J ကို interp အကြမ်းဖက်မှု။ 2018 နိုဝင်ဘာ 21: 886260518812806 ။ Doi: 10.1177 / 0886260518812806 ။
Brem MJ1, သိမ်းသွင်း ထား. AR1, Grigorian H ကို1, Florimbio AR1, Wolford-Clevenger ကို C1, Shorey RC2, စတူးဝပ် GL1.
မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်အချို့သုတေသီများအဖြစ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို (; အလွန်အကျွံ, compulsive နှင့်မထိန်းချုပ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု PPU) ကိုရည်ညွှန်းအရာကိုအထောက်အကူပြုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ဟုန်ထိုးမျက်မြင်။ သိပ္ပံနည်းကျသိပ္ပံနည်းကျသီအိုရီ၊ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့်အပိုင်း၊ longitudinal နှင့်စမ်းသပ်မှုများအရအမျိုးသားများ၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခြင်းတို့အကြားအပြုသဘောဆောင်သောဆက်စပ်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ဎ။ သို့သော်အမြင်ကျယ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသုတေသနနှင့် PPU တစ်နည်းပါးရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှု (IPV) ကျူးလွန်သောသူသည်လူတို့တွင်, အထူးသလည်းမရှိ။ ပစ္စုပ္ပန် Cross-Section လေ့လာမှု Self-အစီရင်ခံ PPU နှင့်ရိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအစီအစဉ်များအတွက် 273 လူတို့တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ IPV ကျူးလွန်အကြားအသင်းအဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေး။ စိတ်ရောဂါ symptomology နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြဿနာများအတွက်စာရင်းကိုင်ပြီးနောက်ရလဒ်များကို PPU နှင့်နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ IPV ကျူးလွန်အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့ဖော်ပြခဲ့တယ်။ တွေ့ရှိချက်များကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ IPV ကျူးလွန်ဖို့ပြောပြတယ်အထူးသဖြင့်အဖြစ်အကြမ်းဖက်လူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။
KEYWORDS: Battery ကို; အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု; မီဒီယာနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး
Doi: 10.1177 / 0886260518812806